प्रिमियमको आधारमा मात्र कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो हैन :- शिवनाथ पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
प्रिमियमको आधारमा मात्र कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्नु राम्रो हैन :- शिवनाथ पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : २३ पुष २०७५, सोमबार १३:२६
३० बर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक कार्यभार समालेका शिवनाथ पाण्डे हाल सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । केन्द्रिय बैंकबाट अवकास भएको दुई महिना पश्चात् उनले सूर्या लाईफमा इन्स्योरेन्समा प्रवेश गरेका थिए । संरचनाहरुलाई अनुशासित ढङगबाट काम गर्ने हो भने बिजनेस सफल हुन्छ भन्ने धारणा बोकेका पाण्डेले कम्पनीलाई सही रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा कम्पनीको आगामी योजना र यसकोे गतिविधीका बारेमा उनी पाण्डेसँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार ः
तपाई बैकबाट बिमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको हो, बीमा र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कस्तो खालको भिन्नता पाउँनु भयो ?
बैंक र बीमा भनेको फरक क्षेत्र हो । बैंकलाई बचत र सम्पतीको सुरक्षा गर्ने एउटा माध्यमको रुपमा लिईन्छ । बिशेष गरि डिपोजिट राख्न र कर्जा प्रवाह गर्ने काम यसमा रहेको हुन्छ । बीमा भनेको भावी दिनमा आउने अनिश्चितताको साथी पनि हो । जनता बैंकमा जान्छ, बीमा कम्पनीहरु जनता माझ जान्छ । बीमाको क्षेत्रमा जनचेतना निकै कमी रहेको छ । बीमा कम्पनी भित्र रहेको जीवन बीमा र निर्जिवन बीमाको बारेमा अझै पनि बुझाउन सकेको छैन । यसले जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्छ र यसका फाईदाहरु के हुन् भनेर अझै बुझाउनै सकेका छैनौ । पैसा भयो भने बचत गर्न बैंकमा जाने प्रवित्ती रहेको छ । तर बीमा गर्नमा भने अझै पनि जाने प्रवित्तीको विकास हुन सकेको छैन । यो कारणले गर्दा बीमा क्षेत्र बैकिङ क्षेत्र जस्तै अघि बढ्न सेकेको छैन । बैंक त बचत मात्र हो । बीमा बचतका साथै अनिश्चिित जोखिमको साथी पनि हो भनेर बुझाउन नसकेको कारण यसमा सबैलाई समेट्न नै सकेको छैन ।
बैंकको तुलनामा बीमा किन अघि बढ्न नसकेको कारण के होला ?
फाइनान्सल एक्सेस भित्र बीमा पनि पर्दछ । राज्यले बीमा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा पनि लिनु पर्दछ । जसरी बैंकलाई राज्यले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएको छ । बीमाको पहुँच वृद्धिको लागि जनचेतनाको रुपमा अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ । बीमामा के फाईदाको बारेमा अझै पनि आमजनमानसमा यसको फाईदाको बारेमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौ । बैंकले बिभिन्न पहुँचको काम गरेर बचतको महत्व बुझाएर नै यसको महत्व बढेको हो । बीमाको बारेमा कसरी बुझाउन सकिन्छ, त्यो आधारमा गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै ः पाठ्यपुस्तकमा राखेर हुन्छ कि घरदैलो कार्यक्रम गरेर हुन्छ वा संचार माध्यमको प्रयोग गरेर हुन्छ । यसको दायरा कुन रुपमा बढाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । पैसा भएपछि बैंकमा बचतको लागि जसरी मानिसहरु आफै जाने गर्छन् । त्यसरी नै बीमामा पनि आउनुपथ्यो । तर त्यो भईरहेको छैन । बीमा गर्दा के फाईदा त भन्ने बारेमा थाहा नै छैन भने उसले कसरी बीमा गर्छ । बैंकमा बचत गर्दा ब्याज आउछ वा उसको बचत सुरक्षित रह्न्छ भन्ने कारणले गर्दा त्यसतर्फ आकर्षण छन् । बीमाको महत्व नबुझेको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरु यसमा आकर्षण हुन सकेको छैन । बीमा बचतको साथै सुरक्षा पनि हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेका छैन । बीमा चेतनाको कार्यक्रममा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको छ । विपन्न वर्गाहरुलाई पनि सरकारले बीमा गराईदिने जस्ता कामहरु गर्दा अझ यसको दायरामा वृद्धि हुन सहयोग पुग्दछ ।
हाल जीवन बीमाको बजार कस्तोे छ ? नयाँ कम्पनीहरु आएसगै पूराना कम्पनीहरुलाई कस्तो चुनौती छ ?
जीवन बीमाको बजारलाई हालको स्थितीमा हेर्ने हो भने यसको बजार राम्रो नै छ भन्नुपर्छ । सम्रगमा यसको बजार व्यापक छ । जीवन बीमा सबैको लागि जरुरी छ । चाहे धनी होस् वा गरिब सबैलाई बीमा जरुरी रहेको हुन्छ । यसमा सबै वर्गलाई समेटिनुपर्छ । जीवन बीमाको बजारमा नयाँ कम्पनीहरुको प्रवेशसगै यसको पहुँच वृद्धिमा पनि यसले सहयोग पुराएको देख्न सकिन्छ । बीमाको दायरा बढेर १० प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा पुगेको छ । बीमा कम्पनीमा नयाँ कम्पनीको आगमनले पक्कै पनि राम्रो पनि गरेको छ । बीमा बजार करीब खाली नै रहेको छ ।
नयाँ कम्पनीहरु आएसगै प्रतिप्रधात्मक रुपमा पनि हामी गईरहेको छ । नयाँ कम्पनीहरु आगमन सगै जीवन बीमाको व्यवसायमा पनि परिर्वतन भएको छ । जनमानसमा जीवन बीमा हुदाँ मुत्यु पछि पाउने भन्ने गलत धारणा रहेको छ । भूकम्प पछि कैयौं घरहरु क्षती भएको थियो तर बीमा गरेको कमै मात्रामा मात्र बीमा गरेको पाएको थियो । उक्त समयको स्थितीबाट पनि बीमाको पहुँच कुन रुपमा रहेको भनेर देख्न सक्छौ । भोलिको दिनमा जोखिमको साथीको रुपमा बीमा छ हौ भन्ने वातावरण अझै हामीले तय भने गर्न सकेका छैनै । त्यसैले जीवन बीमाको बजार जुन रुपमा अघि बढ्नुपर्ने हो । उक्त अनुुसारमा भने अघि बढ्न सकेको पाईदैन । हिजोको दिनमा बीमा बजारमा त्यही केक हो त्यही बाड्ने हो भन्ने धारणा रहेको थियो । तर नयाँ कम्पनीहरु आए सगै उक्त धारणालाई परिर्वतन गराएको छ ।
कम्पनीको प्रथम त्रैमासिक विवरण कस्तो रहयो ? हालको स्थितीमा कम्पनीले पुँजी कसरी जुटाउँलान ?
गत बर्षको तुलनामा राम्रो नै रहेको छ । संस्थाको सबलीकरणको लागि आर्थिक सूचाङकहरु त्यसलाई हामीले खासै महत्व नदिएर प्रिमियमलाई मात्र ध्यान दिएको पाएको छु । संस्था सबलीकरण हुनको लागि धेरै कुराहरुलाई समेट्न सकिन्छ । त्यो कुराहरुलाई मतलब नै नगरेर प्रिमियमको आधारमा मात्रै कम्पनीको मूल्याङकन गरिएको हुन्छ । त्यो अलि गलत धारणा रहेको छ । प्रिमियम त हरेक माध्यमबाट पनि सङकलन गर्न सकिन्छ । ऋण नै लिएर पनि प्रिमियम त उठाईरहेको छ नी यसलाई पनि बुझनु जरुरी छ । त्यसैले कम्पनीको मूल्याङकन गर्दा सबै पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । नयाँ कम्पनीहरुको आधारमा हेर्ने हो भने भ्यालुएसन नै भएको छैन र बोनस दर पनि तोकिएको छैन ।
कुनै पनि सस्थाको स्थापना काल देखि हालसम्म कम्पनी दिगो रुपमा अघि बढीरहेको छ वा छैन । उक्त पक्षलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको हुन्छ ।
हाम्रो कम्पनी मर्जरमा जादैन । हाम्रो पुँजी १ सय १३ करोड पुँजी रहेको छ । यसको ७० प्रतिशत हामीले बोनस सहित राईट इस्यू कल गरिसकेका छौ । बीमा समितीले मार्फत यसको स्विकृति लिईसकेका छौ । यसका साथै आ २०७३/७४ को साधारणसभा मार्फत हामीलाई केही नाफा पनि आउछ । त्यसैले हामीलाई मर्ज हुनु केही जरुरी छैन । बीमा समितले तोकेको २ अर्ब रकम पुराउन सक्ने क्षमतामा हाम्रो कम्पनी रहेको छ ।
बीमक सघंले पुँजी पुरायाउन थप समय माग गरेको छ रे नि ?
बीमा कम्पनीको एउटा समस्या के रहेको छ भने, हामीले चाहेको समयमा साधारणसभामा जानै सक्दैनौ । बीमा समितीले एक्चुरी भ्यालुएसन नगरेसम्म हामीले साधारणसभा नै गर्न मिल्दैन । बीमा समितीले पनि एक्च्ुरीको लागि भारतमा पठाउने र त्यहाँबाट आउन पनि निकै समय लाग्ने र आएपछि साधारणसभाको लागि समय लाग्ने हुन्छ । यो प्रकृयाको कारणले गर्दा पनि यसमा समय लाग्ने हुन्छ । बीमा समितीले एनएफआरएस लागु गर्ने तयारीमा रहेको छ । जसको लागि पनि हामी लागि रहेका छौ । एनएफआरएस फाइनान्सलाई स्विकृति दिने हो भने हामी त्यही अनुसार नै तयारीमा जानु समय लाग्छ । त्यसैको लागि हामीले समय माग गरेको हो ।
एउटा अभिकर्ताले एउटै कम्पनीमा काम गर्न पाउने नयाँ बिधेयकमा ल्याउने कुरा भईरहेको छ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
अभिकर्ता भनेको कम्पनीको मेरुदण्ड नै हो । अभिकताले नै बीमीतलाई बीमा योजनाको बारेमा जानकारी दिने र जनचेतनाको काम गरेको हुन्छ । यो एउटा प्रोफेसनल क्षेत्र पनि हो । त्यसैले एउटै कम्पनीमा रहेर काम गर्दा थप प्रोफेसनको पनि बिकास हुन्छ र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि यसले सघाउ पुराउछ । अभिकर्ताले एउटा कम्पनीमा काम गर्दा उसलाई कम्पनी प्रती आफनोपनको महसुस गराउछ । दुई, तीन वटा कम्पनीमा काम गर्दा कम्पनी प्रती आफनोपनको विकास भने पक्कै गर्न सकिदैन । त्यसैले विधेयकमा एउटै कम्पनीमा काम गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने छलफल भएको होला ।
अन्य कम्पनीको भन्दा सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कस्तो खालको प्रडक्ट रहेको छ ?कुन प्रडक्टमा बीमीतको आकर्षण बढी रहेको छ ?
अन्य कम्पनी भन्दा फरक प्रडक्टहरु भनेर कुनै त्यस्तो छुटै खालको बीमा योजना त छैन । कुनै पनि कम्पनीमा फरक खालको योजना भने हुदैन । त्यही भएको प्रडक्टलाई फरक ढङगबाट ल्याएको मात्र हो । हाम्रो कम्पनीमा हाल सबैभन्दा बढी बिमितको आखाँमा सूर्या ग्रामीण कर्जा म्यादी जीवन बीमा परेको छ । जसले ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गलाई पनि यसले समेट्को छ , यसका साथै बाल जीवन बीमा, मनी ब्याक प्रडक्टहरु हाल यी बीमा योजनाहरु प्रती पनि बीमीतहरु आकर्षित भएका छन् ।
समितिले नयाँ तालिम केन्द्र स्थापना गरेको छ । साथै त्रिविबाट पनि एक्चुरी साईन्सले मान्यता पाएको छ, यसबाट तपाईहरुले कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
बीमा बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । हिजोको दिनमा तुलनामा कम्पनीहरुको सङख्या पनि बढेको छ । कम्पनी बढेसगै बजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव झनै बढेको छ । बीमा समितीले तालिम केन्द« र त्रि.वि मान्यता प्राप्त एक्चुरी साईन्सले भावी दिनमा बीमा बजारमा भएको अभावलाई परिपूर्ती गर्ने काम गर्दछ । हिजोको दिनमा यसको कम महत्व भएको कारण यसप्रती कुनै ध्यान थिएन् । तर आजको दिनमा यसको पहुुँच बढेसगै बीमाको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । डाक्टर, इन्जिनीयर, पाईलट बन्ने सोच रहेको बजारमा बैंकको महत्व बढेसगै सि.ए प्रति आकर्षित बढ्दै छ । बीमाको बजारलाई पनि एक्चुरी साईनसको निकै महत्व हुने भएकाले यस प्रती पनि आकर्षित हुदै गईरहेको छ । यसको महत्व बुझेर नै यस प्रती आकर्षित भईरहेका छन् । बजारमा नक्कली पोलिसीहरु पनि जारी भईरहेको छ यसबाट बीमीतहरु कसरी सुरक्षित हुने त ?
बीमा के हो भनेर अझैसम्म बुझाउन सकेको छैन हामीले हालसम्म बीमाको पहुँच बढेपनि जुन रुपमा बीमाको चेतना हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा बीमालाई लाग्न सकेको छैन । बैंकमा बचत गर्न कुनै एजेन्टको आवश्यकता पदैन । चाहेको समयमा बचत गर्न सक्छ । तर बीमा गर्न अभिकर्ता चाहिन्छ । बीमाको बारेमा जहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा बुझदैन तबसम्म बीमीतलाई जानकारी त दिनै परयो ।
बीमीतले पनि बीमा लिदाँ आफैले पनि योजनाको बारेमा बुझनु जरुरी हुन्छ । कसैले भनेको वा विज्ञापनको आधारमा मात्र बीमा योजना खरीद गर्न बानी गर्नु हुदैन । आफूले पनि यसको बारेमा सर्तकता अपनाउनुपर्छ । मिस सेलिङबाट बच्न पनि बीमीत आफै सजग रहनुपर्छ । आफूले लिन लागेको बीमा योजनाको बारेमा के रहेछ भन्ने जानकारी आफूमा पनि रहन जरुरी रहेको हुन्छ ।
सरकारले जीवन बीमाको क्षेत्रमा के गरयो भने यसको बजारमा केही सुधार आउन सक्छ ?
अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनेमा निर्जिवन बीमालाई मात्र समेटिएको छ । सम्पती बीमा घर बनाउदा ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा, मोटर बीमा अनिवार्य गराएको छ र स्वास्थ बीमामा ध्यान दिएको पाईन्छ ।
सरकारले मोटर बीमा योजना ल्याएको छ । तर त्यसमा जीवन बीमालाई समेटेको भए राम्रो हुन्थ्यो । मोटर चालकको पनि जीवन बीमा गराउने जस्ता सुविधाहरु यसमा थप पनि गर्न सकिन्छ । बीमा चेतना जनताको घरदैलोसम्म गएर हुन्छ वा संचार माध्यमबाट यसको प्रचारमा बिशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग मार्फत ग्राहकहरुलाई सुविधा दिन केही व्यवस्था गर्दै हुन्छ ?
प्रविधिको युग सँगै हामी त्यस अनुसार त चल्नै पर्छ । हाम्रो पनि चाहाना बीमीतले घरमै बसेर बीमा योजना लिन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । सूर्या ग्रामीण बीमा योजनालाई वेभ बेसमा लैजाने तयारीमा गदैछौ । जसको लागि नियमनकारी निकायको स्विकृति त लिनै परयो । ऐनमा भएको कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर यस बिषयमा अघि बढ्नुपर्ने रहेको हुन्छ ।
कम्पनीको आगामी रणनीती के रहेको छ ?
हालको लागि त हामी पुँजी पुरायाउने योजना रहेका छौ । शाखा संजाल वृद्धि गर्ने, बीमीतले चाहेको बीमा योजना ल्याउने , नेपाली बजार सुहाउदो योजना ल्याउने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र राम्रो कम्पनीको रुपमा स्थापित गराउने हाम्रो रणनिती रहेको छ ।